Dagaal maanta si lama filaan ah uga qarxay magaalada Kismaayo – SBC
Dagaal maanta si lama filaan ah uga qarxay magaalada Kismaayo
Maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hose waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleesho oo kala taabacsan Maamulka Jubaland iyo ninka sheegta in uu yahay Madaxweynaha Maamulkaas ee lagu magacaabo Barre hiiraale.
Dagaalkan ayaa soconayay mudo saacado ah waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay inkasyoo khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo tira badan ay jiraan .
Sida ay ku waramayaan wariye yaasha SBC ee Kismaayo, dagaalkan ayaa ka bilowday dhacdooyin lama filaan ah oo dhinacyada kala duwan ee ku sugan magaalada ku kala dheceen gaadiid .
Wararka ayaa intaas ku daray in dagaalku yahay mid iminka xaafad ka mid ah maagalada ka sii socda taa soo lagu magacabo Xaafada Farjano inkastoo markii hore uu ka bilowday isgoyska caanka ah ee loo yaqaan aargada.
Waxii ku soo kordha kala soco wararka xiga SBC Online